Sarkaal Ciidan iyo askar lagu dilay gobolka Hiiraan | KEYDMEDIA ENGLISH
Sarkaal Ciidan iyo askar lagu dilay gobolka Hiiraan
Dagaalka ayaa ka dhacay duleedka degmada Buula-Burde, halkaasoo dhawaan Ciidanka dowladda ka billaabeen howlgallo jidka lagu furayo.
BELEDWEYNE, Soomaaliya - Sarkaal sare oo kamid ahaa Ciidamada dowladda oo lagu magacaabi jiray Col Muumin Jiis iyo afar askari oo katirsanaa Ciidanka dowladda, gaar ahaan qeybta 21-aad ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka Hiiraan.
Mas'uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in dagaalka oo shalay ka dhacay duleedka Buulo-Burde ay ku dhaawacmeen Saraakiil ay kamid yihiin Cali Dhammeey, Xuseen Waasuge Xeylle, Siyaad Axmed Max'med Indhooy iyo Geesaweyn.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhankeeda kasoo saartay dagaalka, iyadoo sheegtay in 30 xubnood oo katirsanaa Kooxda Al-Shabaab lagu dilay weerar ay ku qaadeen tuulooyin nawaaxiga Buulo-Burde ku yaalla, oo laga go'doomiyay degmada.
Ciidanka Jabuuti ee qeybta ka ah AMISOM ayaa ka qeyb qaatay dagaalka, waxaana la ogeyn dhankooda khasaaraha kasoo gaarey. Duulaanka cusub waxaa hogaaminaya gudoomiyaha Hiiraan Cali Jeyte, waxaana ujeedka uu yahay in la isku furo degmooyinka gobolka, oo Al-Shabaab go'doomisay.
Comments Topics: hiiraan soomaaliya
Heavy fighting in central Somalia leaves 25 militants dead
News 1 June 2021 13:11
General Odowa Yusuf Rage, the commander-in-chief of the Somali national army has confirmed to the state media that at least 25 militants are dead in the battle.